Tottenham Hotspur Oo Ka Hadashey Heshiis Cusub Ay La Gasho Xidiga Son
HomeWararka CiyaarahaTottenham Hotspur oo ka hadashey Heshiis Cusub ay la gasho Xidiga Son
December 4, 2020 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay kalsooni ku qabto in Son Heung-min uu mustaqbalkiisa u hibeyn doono kooxda ka dhisan Waqooyiga London dhawaan.
Isaga iyo Harry Kane , Son ayaa si lama filaan ah ku bilaabay xilli ciyaareedka 2020-21 wuxuuna durbaba ku faanaa 11 gool iyo shan caawin tartamada oo dhan .
Kabtanka Kuuriyada Koofureed wuxuu door muhiim ah ka qaatay Spurs inay hogaamiso miiska kala sarreynta Premier League, Tottenham oo kamid ah awoodaha ka jira Waqooyiga London ayaa loo maleynayaa inay diyaar u yihiin inay ku abaalmariyaan Son qandaraas cusub oo qaali ah oo isbuucii ku kacaya k 200k.
Sida laga soo xigtay ESPN , Tottenham ayaa rajo wanaagsan ka qabta in Son uu qalinka ku duugi doono heshiisyo cusub, laakiin kooxda ayaan ku deg degin inay heshiis la gaarto madaama 28 jirkaan uu weli seddex sano ka hartay inuu ku sii joogo kooxda.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegeysa in Danny Rose uu qarka u saaran inuu qandaraas cusub saxiixo xagaagan, laakiin daafaca bidix ee reer England ayaan ahmiyad weyn siinaynin ka dib markii laga reebay safka Mourinho ee Premier League iyo Europa League.
Son ayaa urursaday wadar ahaan 96 gool 244 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu u wareegay Spurs oo uu kaga soo biiray kooxda Bayer Leverkusen sanadkii 2015.